Xalka dhibaatooyinka guud ee qalabka soo saarista ultrasonic
Qalabka soo saarista Ultrasonic waa nuxurka dawada Shiinaha ee la soo saaray, sababtoo ah howlaheeda badan, waxqabadka wanaagsan, qaabdhismeedka is haysta, habsami u socodka howsha, ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha soo saarista iyo fiirsashada. Maanta, waxaan soo bandhigi doonnaa dhibaatada guud ...
Qalabka Ultrasonic naqshadeynta cusub ee warshadaha slurry
Qalabka ay soo saartay Hangzhou Precision Machinery Co., Ltd. waxaa loogu talagalay hagaajinta hannaanka wax soosaarka baaxadda weyn. Sababta oo ah taangiga oo aad u ballaaran ama hannaanka taangigu uusan si toos ah ugu dari karin qalabka ultrasonic qalabka taangiga, qulqulka taangiga weyn ayaa dhex socon doona ...
Xiinka Xiinka waa nooc ka mid ah mowjad farsamo oo inta jeer ee gariirku ka sareeyo tan mowjadda codka. Waxaa soo saaray gariirka transducer ka yar kacsan ee danab. Waxay leedahay astaamaha soo noqnoqodka sarreeya, dhererka dhererka gaaban, ifafaalaha yar yar, gaar ahaan di ...
In warshadaha kala duwan, habka wax soo saarka ee emulsion aad bay u kala duwan yihiin. Kala duwanaanshahan waxaa ka mid ah qaybaha loo isticmaalay (isku dar ah, oo ay ku jiraan qaybo kala duwan oo xalka ah), habka emulsification, iyo xaalado badan oo farsameyn ah. Emulsions waa kala firidhsan laba ama in ka badan oo dareereyaal ah oo aan la qaadan karin ....
Kiiska goobta ee kala firdhinta alumina ultrasonic
Hufnaanta iyo kala firdhinta walxaha alumina waxay hagaajineysaa tayada maaddada hoosta tallaabada 'ultrasound', cabirka qaraabada isku-darka isku-darka ayaa sii yaraanaya, qeybinta waxay noqoneysaa mid isku-mid ah, isdhexgalka u dhexeeya matrixka iyo kala firidhku wuu kordhayaa, iyo kombiyuutarka ...
in ka badan 60 jeer oo hufnaan ah ayaa kororta iyadoo la adeegsanayo ultrasound aagga laga soo saaro
Codsiga ugu weyn ee tiknoolajiyada ultrasonic ee ku saabsan diyaarinta daawada dhaqameed ee Shiinaha waa soo saarista ultrasonic. Tiro aad u tiro badan oo kiisas ah ayaa caddeynaysa in tiknoolajiyadda soo saarista ee ultrasonic ay kordhin karto wax-soo-saarka soo saaridda ugu yaraan 60 jeer marka la barbar dhigo tikniyoolajiyadda soo jireenka ah. Fr ...
Kala firidhida Ultrasonic waa hab wanaagsan oo ku faafta qaybaha Nano
Qaybaha Nano waxay leeyihiin cabbirka yar yar, tamar dusha sare leh, waxayna u janjeeraan inay si iskood ah u agglomerate u noqdaan Jiritaanka agglomeration wuxuu si weyn u saameyn doonaa faa'iidooyinka budada nano. Sidaa darteed, sida loo hagaajiyo kala firdhinta iyo xasilloonida budada nano ee dareeraha dhexdhexaadka ah waa mid aad loo soo dejiyo ...
Sumadeena JH ayaa gudbisay arjiga
Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd. ayaa diirada saaray aagga daaweynta dareeraha ee ultrasonic in ka badan toban sano. Ilaa hadda, qalabkayagu wuxuu ku sugnaa beeraha daaweynta saliidda CBD, diyaarinta nano liposome, firdhinta graphene, kala firidhsan, kala-baxa alumina, soo saarista dawada Shiinaha ...
Maxay tahay sababta qalabka soo saarista ultrasonic uu caan ku yahay dadka isticmaala?
Qalabka soo saarista Ultrasonic wuxuu leeyahay waxtarka soo saarida sare, heerkulka caadiga ah iyo soo saarida cadaadiska, isticmaalka tamarta oo hooseeya, heer sare ee otomatiga, wuxuuna leeyahay astaamo iyo faa iidooyin aan qaababka soo saarida caadiga ah aysan isbarbar dhigi karin. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa daawooyinka, wuxuu ...
Soosaarida alaabada dalabka warshadaha ultrasonic iyo qaabeynta xalalka ayaa ah kuwo aad xirfad u leh una baahan shaqaale gaar ah. Hangzhou Sax Makiinado Co., Ltd. ayaa waxaa ka go'an in la naqshadeeyo ee codsiyada ultrasonic warshadaha, gaar ahaan berrinkii kala firidhsan. Horaantii ...
Maxay macaamiisha yiraahdeen
Tiknoolajiyada Ultrasonic waxay leedahay noocyo badan oo codsiyo ah, shirkadeena Hangzhou Precision Machinery Co., Ltd. forcus on sonochemistry ultrasonic oo ay ku jiraan soo saarista ultrasonic, kala firdhinta, emulsification, homogenization, degassing iwm Kadib in ka badan 8 sano oo xog uruurin iyo dhibaato ah ...
qalabka ultrasonic Canton Fair
Bandhigga Carwada ee 2020 waxaa la qaban doonaa laga bilaabo Juun 15-keeda ilaa 24-keeda muddo 10 maalmood ah. Qolka tooska ah ee qalabkayaga ultrasonic wuxuu ku jiraa arjiga iyo nidaamka, waanan kugula soo socodsiin doonaa waqtiga haddii horumar jiro.